ပွင့်လင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Vietnam OEM ODM-heattransferpaperb2b.com
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> reflective အပူလွှဲပြောင်း -> ပွင့်လင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်
Hauming Import & Export CO., LTD. နိုင်ငံတကာဆောင်ထုတ်လုပ်သူတဦး၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည် ပွင့်လင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်။ ငွေရတတ်သောသူအတွေ့အကြုံနှင့်ခိုင်ခံ့သောနည်းပညာ၏အခြေခံစခန်းတွင်။ ကျနော်တို့ clients များ '' လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုပေးအပ်၌ပါဝင်နေကြသည်။ သင်တို့တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရှာနေနေတယ်ဆိုရင် Vietnam, ငါတို့သည်သင်တို့၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြ၏။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ယနေ့!
အဆိုပါ ရောင်ပြန် ပစ္စည်း ဖြစ် ပွင့်လင်း, ဒါကြောင့် အားဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်း မတူညီသော အရောင်အဆင်း, မတူညီသော ရောင်ပြန် အရောင်အဆင်း လိမ့်မည် ဖြစ် ပေးအပ်သည်။ ဤ ပစ္စည်း ဖြစ် 50~80 candela ။ အကယ်. ခင်ဗျား ရှိ မည်သည့် နောက်ထပ် မေးခွန်းများ, ခင်ဗျား နိုင် အဆက်အသွယ် ကျွန်တော်တို့ကို အားဖြင့် ဖုန်းကို သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်, ကျွန်တော်တို့၏ ဖုန်းကို ဂဏန်း ဖြစ် 886-2-26818851, ဒါမှမဟုတ် ဆက် ကျွန်တော်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (http://www.hauming.com.tw) ။
Transparent Film | Transparent Film | Klarsichtfolie | Прозрачной пленки | Transparent Film | Transparent Film | पारदर्शी फिल्म | Transparente Film | Transparante Film | شفافة السينمائي | Tem trong | ฟิล์มใส | Transparan Film | স্বচ্ছ ফিল্ম | Şeffaf Film | 透明膜